Kitra vehivavy – «Division Elite» : hiady ny toerana fahefatra ny Mifa sy ny Ascuf | NewsMada
Kitra vehivavy – «Division Elite» : hiady ny toerana fahefatra ny Mifa sy ny Ascuf
Hitohy, anio any amin’ny kianja Rabemananjara Mahajanga, ny andro fahatelo hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, baolina kitra vehivavy “Division Elite”. Anisan’ny lalao hisongadina ny an’ny Mifa Analamanga sy ny Ascuf Matsiatra Ambony, ho an’ny sokajy “B”. Hiady ny tapakila farany hahafahana miatrika ny lalao manasa-dalana mantsy ny roa tonta.
Hatreto mantsy, samy manana isa telo avy ny andaniny sy ny ankilany. Fandresena iray sy faharesena iray avy ny azon’izy ireo tamin’ny lalao roa vitany. Manantombo amin’ny “goal average” anefa ny ekipan’Analamanga raha mihoatra amin-dry zareo avy any Fianarantsoa. Tafita amin’ny ankatoky ny famaranana ny Mifa raha toa ka misaraka ady sahala ny roa tonta, anio.
Marihina fa efa tafakatra amin’izany dingan’ny manasa-dalana izany ny Sab-Nam, tompondaka farany, sy ny Asot ary ny Askam. Hatao, ny alakamisy ho avy izao, ireo lalao manasa-dalana, amin’ity fifaninanam-pirenena vehivavy, ity.
Toy izao ny fandaharan-dalao anio :
07:30 – Mifa # Ascuf (B)
09:30 – Som # FC Prescoi (A)
02:00 – AS Comato # AS Sab-Nam (B)
04:00 – Asot # Askam (A)
Volley-Afrika U19: handray ny fifaninanana i Madagasikara 28/01/2021
Ao anatin’ny faha-160 taon’ny fiangonana: hankalaza ny faha-20 taona ny RFF Amparibe Famonjena 28/01/2021
Fankalazana ny faha-30 taona: hanao seho miavaka ny Tanora Masina Itaosy 28/01/2021
Mahazo 5 kilao isan-kerinandro: amidy 430 Ar ny kapoakan’ny Vary tsinjo 28/01/2021
Fampanarahan-dalàna ny fitateram-bahoaka: hametrahana GPS avokoa ireo taxi-be eto an-dRenivohitra 28/01/2021